बहादुर सिंह लामा (तामाङ) दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालिन एमाओवादी महासचिव पोष्टहादुर बोगटीलाई हराएर चर्चामा आए । २०४२ सालदेखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको राजनीति सक्रिय राजनीति गरिरहेका उनले १३ औं महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसभित्र इमान्दार र युवा नेताको छबि बनाएका ..
डा.बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्दै एकीकृत माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा लागेका..
कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ । तर, तपाईंं अनपेक्षित रूपमा मौन हुनहुन्छ ? स्वास्थ..
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्णयअनुसार १२औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको ..
एनसेल कर प्रकरण यतिबेला निकै चर्चित छ । टेलियासोनेरा नामक कम्पनीले एक्जिएटा नामक कम..
मधेसी मोर्चाका तीन नेताले तपाईंका पार्टी अध्यक्षलाई अब केही पनि नगर्नु–गराउनु निर्देशन दिएको छ, तपाईका अध्यक्षले अब कुनै पनि गतिविधि गर्नुहुन्न त ? गर्नुहुन्छ, सबै गतिविधि गर्नुहुन्छ । मधेसी मोर्चाको षड्यन्त्रपूर्ण विज्ञप्ति हामीले पनि पढ्ने मौका पायौं । त्यो विज्ञप्तिमा पूराका पूरा इष्र्या, द्वेषको आधारमा चार नम्बर बुँदा लेखिएक..
विष्णु भण्डारी कवितामा चिनिएका नाम हुन् । ४० को दसकको सुरुवातदेखि नै कविता लेखनमा सक्रिय उनको सात काव्य कृति प्रकाशित छन् । त्यसपछि भने उनी उपन्यासका साथ देखा परेका छन् । ‘पहेँलो घाम’ उनको पहिलो उपन्यास हो । आख्यानकारको पहिचानसँगै उनको दौडधूप पनि बढेको छ । आज बिहान पनि पोखरामा उनको पुस्तकमाथि बहस भएको छ […]
प्रचण्ड नेतत्वको एकीकृत माओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीवीच अहिले एकताको विषय चर्चामा छ । यी दुई पार्टीभित्र एकताका लागि के–के प्रयास भएका छन् र एकता कति नजिक छ ? डिस्कवरी न्यूज नेटवर्क डिएनएन गेष्ट रुममा आउनु भएकी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसालसँग नेत्र पन्थीले माओवादीहरुबीचको एकता र डा.ब..
माओवादी पुर्नगठन अभियान के हुँदैछ ? माओवादी आन्दोलन पुर्नगठन अभियान जुन युवाहरुको टिमले सञ्चालन गरेको हो, त्यो आज पनि जारी छ । यसले तय गरेका उद्देश्य अनुसार नै आज माओवादी आन्दोलन, पार्टी र समूहहरु एकताको लागी गम्भीर बहसमा छन् । छलफलसहित एकता अर्थात पुर्नगठनको अन्तिम बहसमा जारी छ । पुर्नगठन अभियानले तयार पारेको खाकाको [&h..
निर्माण ठप्प हुन लागेका बेला शिवम् सिमेन्टले स्किम ल्याएर जनतालाई राहत दियो
यो वर्ष भूकम्पका कारण देशमा धेरै संरचना ध्वस्त भए । भूकम्पले ध्वस्त संरचना निर्माण हुन नपाउँदै मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी सुरु भयो । इन्धन अभावले देशका उद्योग, कलकारखाना चल्न सकेनन् । सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री अभाव हुन थाले । महँगी, कालाबजारी बढ्न थाल्यो । घर–भवन लगायत निर्माण गर्ने योजना बनाएका उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न..
विभेद कायम रह्यो भने देश विखण्डनमा जान्छ भनि अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएपछि शरतसिंह भण्डारीले तत्कालिन अवस्थामा रक्षा मन्त्रालय मात्र होइन विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी पनि छाडेर हिडे । पछि, आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन गरे उनले । संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धन गठन ग..
ओली सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव हालै दिल्ली भ्रमणबाट फर्किएका छन् । के के भयो दिल्लीमा, दिल्लीले के गर्न भनेको छ तथा ओली सरकारको विकल्प लगायतको विषयमा रातोपाटीका लागि एसके यादवले आइतबार गरेको कुराकानी : तपाईंंहरू चारदिने दिल्लीभ्रमणबाट फर्केलगत्तै त वार्ता केही सका..
चीनसँग समयमै उच्चस्तरीय वार्ता नगर्नु गंभीर कुटनीतिक कमजोरी सरकारको काम कारवाहीसँग सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन मन्त्रीको आचारणबारे पार्टी कमिटिमा पहिलोपटक छलफल हुनु ठूलो कुरा पुनर्निर्माणसम्बन्धि विधेयकप्रति कांग्रेस गैरजिम्मेवार, मोर्चा गम्भिर भएन तीन बुँदे रोडम्याप बनाउँदा भारतसँग गोप्य सम्झौता त भएको छैन भनेर बैठकमै सोँधेँ अहिले..
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण अन्य भन्सार नाका जस्तै कैलाली भन्सार नाकामा पनि त्यसको असर प¥यो । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको स्थिति सहज भएको छैन । पछिल्लो पटक यो नाका सहज बन्दै गएको छ । तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ । यही नाका भएर पहिलो पटक मोटरसाइकल भित्रिएका छन। यसले राजश्व असुलिमा सहयोग पुगेको छ । […]
भारतीय नागरिक एसडी मुनी नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् । मुनी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्वप्रोफेसर हुन् भने हाल भारत सरकार मातहत रहेको इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स इस्टडिज एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए) मा आबद्ध छन् । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी यथावत राखिरहेको अवस्थामा भारतीय थिंक ट्यांक के सोच्दै छन् ? यसै सन्दर्भमा दिल्लीमा रहेक..
भारतको नाकावन्दीले गर्दा केही समय यता नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रेको छ, दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै बिग्रन्छ कि अब छिटै समाधान हुन्छ ? जति बिग्रनु पर्ने हो बिग्रिसकेको छ, । यो भन्दा नराम्रो दिन आउँछ जस्तो लाग्दैन, नराम्रा दिन त अहिले चलिरहेका छन् । नेपालमा आएर मान्छेहरुसँग कुरा गर्दा मैले भारत विरोधी भावना बढेको पाएँ […]
पछिल्लो समय तराई मधेसमा देखिएको समस्यालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सक्रिय भएका देवेन्द्र यादव संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि राष्ट्रलाई मधेसको समस्याको दमनबारे जानकारी गराउन जेनेभासम्म पुगे । त्यहाँ उनले जानकारी मात्र गराएनन् नेपालको नयाँ सविधान पनि जलाए । त्यसैगरि सविधान जारी हुनुअघि उनले भारत गएर मधेसको समस्याबारे लिखित रुपमै जा..
तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि मधेस बन्द छ, यस अवस्थामा तपाईंको गुजारा कसरी चलेको छ ? अहिले अलि अप्ठेरो छ, तर गुजारा चलेको छ । पहिला ग्यास चुलोमा खाना पकाउथ्यौँ, अहिले जलावन (दाउरा) मा पकाउँछौँ । तेल नपाएर तीन महिनादेखि (बोलोरो गाडी देखाउँदै) गाडी थन्काएर राखेका छौँ । यसो काम परेका बेला मोटरसाइकल चढ्छौँ । दाल–चामलको […]
दिलनाथ गिरी प्रमुख सचेतक, राप्रपा नेपाल देशै नरहने माग कसरी पूरा गर्ने ? संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनताको चाहना देशमा शान्ति छाओस्, सबै मिलेर बस्ने वातावरण बनोस् भन्ने थियो । तर, संंविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी दलले आन्दोलन गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । संविधानका विभिन्न बिषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि राप्रपा नेपालले त्यस्..
शनिबार बिहान एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको कीर्तिपुर नगर कमिटीले नेपाल संवतको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी थिए । कार्यक्रम सकेर फर्कंदै गर्दा गाडीभित्र नै उनले डिस्कभरी न्युज नेटवर्क (डिएनएन) का लागि संक्षिप्त कुराकानी गरे । नयाँ सरकार गठनपछि उनले कुनै पनि मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएका थ..
भारतको नाकाबन्दीका कारण देशमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या छ । यसका लागि सरकारले भारतीय एकाधिकार तोड्दै चीनबाट इन्धन ल्याउने भएको छ । चीनसँग इन्धन ल्याउने पहल गर्न आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन भर्खरै चीन गएर फर्केका छन् । अर्कोतर्फ देशमा आपूर्ति व्यवस्थामा अनियमितता भएकाले थप समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ । ..
सरकारले के चाहन्छन् कस्तो चाहन्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो मागको सम्बोधन जति छिट्टो हुन्छ त्यति छिट्टो हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौ । यदि सरकारले बल प्रयोग गरेर वा दुई चार जनालाई मारेर आन्दोलनलाई दवाई दिन्छु भनि सोचेका छन् भने त्यो समय गइसकेको छ । त्यो अवस्था अब छैन । आन्दोलन चलिरहन्छ, चाहे राज्यले गोली चलाईयोस् वा नाकाबाट हा..
तपाई सरकारको उपप्रधानमन्त्री मधेशको अहिलेको समस्याको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? –म मात्रै होइन, पुरै सरकार मधेश आन्दोलनको बारेमा निकै गम्भीर देखिएको छ । पछिल्लो समय ओलीजीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले वार्ताको पहल गरेर वार्तालाई सकारात्मक मोडमा पुर्याएको छ । यही सरकारको पालामा प्रथम पटक वार्तामा आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन..
दुई महिनादेखि भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको समस्या निकै गम्भीर बनेर गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको समस्या हल गर्न सरकारले चीनबाट आपूर्ति गर्ने गृहकार्य थालेको छ । चीनले झन्डै १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा दिइसकेको छ, जुन नेपाल–चीन नाका केरुङमा आइपुगेको छ । चीनबाट दीर्घकालीन र व्यावसायिक हिसाबले तेल ल्याउने सम्बन्धम..
आन्दोलनका क्रममा बाराबाट २९ भदौमा समातिएका जितेन्द्र सोनल १८ दिनपछि रिहा भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका बेला ट्रकमा आगो लगाउन संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई समातेको थियो । तर, अदालतले सिडियो गैरकानुनी ढंगबाट मुद्दा चलाएर थुनेको भन्दै जिल्ला अदालतले सोनललाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । संयोग यहाँ कस्तो भयो भने, उनी स..